Plum mamboly sy mikarakara | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Plum mamboly sy mikarakara
Tsiambaratelon'ny fambolena sy ny fikarakarana ny kavina
Toy ny hazo zaridaina, ny volon'ondry dia manana ny fotoanany sy ny fepetra ilaina amin'ny fambolena. Zava-dehibe ny manisy azy ireo, satria ny fahadisoana faran'izay kely dia afaka manaisotra anao amin'ny hazo sy ny vokatra efa nandrasana efa ela. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia manoritsoritra ny endri-javatra sy ny teti-bidin'ny fambolena plum, milaza aminao ny fomba hisafidianana ny toerana mety ho azy sy hikarakarana azy mandritra ny vanim-potoana mitombo.
Plum mamboly sy fikarakarana
Mampitombo ny lavaka fanosotra: ny soso-kevitry ny zaridaina
Indraindray, mihinana voankazo matsiro maromaro, misy faniriana hanandrana haniry taolana iray mba hahazoana hazo vaovao mamokatra. Ny valim-panontaniana dia matetika misy fanontaniana mikasika ny hoe afaka maniry karazana voankazo na kolontsaina mahavokatra avy amin'ny vato ao an-trano ianao. Azo atao izany, saingy sarotra izany, satria alohan'ny hanangonam-bolo amin'ny vato dia ilaina ny manomana.
Inona ny hena Hongroà ary ahoana no hampitombo azy ao amin'ny faritra misy ahy
Eo amin'ny tontolo manerantany dia misy karazany 30 ny karazan-driaka. Ny ankamaroan'izy ireo dia misaraka amin'ny sampana samihafa - ny voalazan'ny mpamboly. Amin'izao fitaovana androany izao dia hiresaka an'io karazana hogadra Hongroà io isika. Ny toetra sy ny endriky ny donkon'ny hongroà Hongroà dia karazana karazana fiononam-be.
Ireo singa mampitombo ny fako sinoa: fambolena sy fiahiana
Sinoa dia mahalana vao mihalehibe ao an-jaridainay, nefa misy mbola mafana fo izay manandrana manamaivana izany. Raha ny zava-misy, dia mahafinaritra foana ny voankazo matsiro sy mamy, manome akanjo tsara tarehy sy manitra, mamoa voa vao haingana. Ankoatra izany, ny karazan'ireny fofona ireny dia mora ampiasaina amin'ny toe-java-misy ara-jeografika, sarotra, manohitra ny aretina sy ny bibikely.
Karazana voankazo malaza amin'ny teny Hongroà
Plum Hongroà dia nanjary nankafy ny zaridaina. Ny karazany dia mitovy amin'ny loko volomparasy mamony, amin'ny fofona manitra, ary ny felan'ny Hongroà dia mitovy endrika amin'ny atody. Avy amin'ny karazana varim-bazaha varimbazaha ihany no manao tsimoka, satria ahitana be dia be ny pektina, siramamy ary zavatra maina. Ny plough dia ampiasaina amin'ny fisakafoanana sy fihinanana vaovao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Plum mamboly sy mikarakara